လေဖိအားများအတွက်သံလိုက်ဖိအားထိန်းချုပ်အဆို့ရှင် China Manufacturer
ဂဟေစက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve,အသေးစားအနိမ့်ဖိအား Solenoid Valve,ဓာတ်ငွေ့ရောစပ်သောသံမဏိ Pulse Valve
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ဂဟေစက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve,အသေးစားအနိမ့်ဖိအား Solenoid Valve,ဓာတ်ငွေ့ရောစပ်သောသံမဏိ Pulse Valve
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve > လေဖိအားများအတွက်သံလိုက်ဖိအားထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်
ပထမ ဦး စွာ ZGM ညာထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်:
ZGM ညာထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်ညာထောင့်လေယာဉ်မှူးမြှေးသည်ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှု၊ မြင့်မားသောဆေးထိုးပမာဏ၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း၊ လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှု၊ မြင့်မားသောဂျာမန်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပို့ကုန်စီးရီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး၊ အဆို့ရှင်; နှင့်မျှမခဲယဉ်းသို့မဟုတ်ကြည်လင်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။
မော်ဒယ်: BZCJ, B: ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ။
နှစ်ခု, ZGM လက်ျာထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု:
ZGM ညာဘက်ထောင့် Pulse solenoid အဆို့ရှင်ကိုဆေးဝါးစက်ရုံ၊ စက္ကူစက်ရုံ၊ သစ်သားစက်ရုံ၊ အစာကျွေးစက်၊ ဆိုးဆေးစက်ရုံ၊ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအိတ်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးနှင့်ကျပ်ခိုးမှုတ်ခြင်းစနစ်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
1. 1. ကုန်ပစ္စည်းအမည်နှင့် ZGM ၏ညာဘက်ထောင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် pulsed ။ ZGM caliper pulse လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် caliber 3. သင်သည်ငါတို့၏မှန်ကန်သောရွေးချယ်ရေးများအတွက်ပူးတွဲဖိုင်များရှိပါသလား
နှစ်။ အကယ်၍ ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်ကိုဒီဇိုင်းဌာနမှရွေးပြီးပါက ZGM ညာထောင့်သွေးခုန်နှုန်းလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်၏အဆိုအရကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဌာနသို့တိုက်ရိုက်မှာယူပါ။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဂဟေစက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve , အသေးစားအနိမ့်ဖိအား Solenoid Valve , ဓာတ်ငွေ့ရောစပ်သောသံမဏိ Pulse Valve , အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ငွေ့ solenoid Valve , ခြောက်ပိုင်းခွဲ Pulse Solenoid Valve , မြှေးအမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ solenoid Valve , နှစ်လက်မနှင့်တစ်ဝက် Solenoid Valve , ညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve 24V